Ma maleysan kartid ganaaxii ay la kulantay gabadhii qasabka kusoo gashay garoonka Finalkii UCL iyo lacagtii waalida aheyd ay ka faa’iida. – Filimside
ARRIMAHA BULSHADA CIYAARAHA Nolosha Jilayaasha WARARKA MAANTA
Ma maleysan kartid ganaaxii ay la kulantay gabadhii qasabka kusoo gashay garoonka Finalkii UCL iyo lacagtii waalida aheyd ay ka faa’iida.
by Cabdiraxmaan Anteeno June 8, 2019 505
Sabtidii lasoo dhaafay Finalkii UCL waxaa garoonka cayaarta ka socotay orod kusoo gashay gabadha reer mareykan ee Kinsey Wolanksi’s iyadoo jirkeeda inta badan uu qaawanaa arintaas oona sababtay in cayaarta la hakiyo.
Hadaba xiriirka kubadda cagta yurub ee UEFA ayaa gabadhaan ku ganaaxay 5,000 oo Euro maadaama ay sabab u noqotay in cayaarta la hakiyo.
Sidoo kalana waxaa ganaax 10,000 Euro garka u galiyay booliska Spain maadaama si sharci daro ah u xayaysiisay shabakad kuwa aflaamta galmada ah kadib markii ay funaanada ay xirneyd kusoo qoratay magaceeda.
Kinsey ayaa funaanada madow ay wadatay kusoo qoratay Vitaly Uncensored oo ah shabakad aflaamta xun xun laga daawado hase yeeshee lacagtaas lagu ganaaxay waxba agteeda kama ahan maadaama ay heleen faaiddo kabadan 3.5 Million oo Euro.
Shabakada ay Kinsey xayaysiisay waxaa lahaa saaxiibkeeda u dhashay wadanka Rusia waxayna xayaysiintaas ku heleen dakhligaas aadka u faraha badan.
Mesut Ozil oo balan qaaday inuu bixin doono qarashka qaliinka 1,000 caruur xili hadiyadii arooskiisa ugu deeqay barakacyaasha Syria.
Wax Ka Ogow 5 Filim Ee Sunil Shetty Qiimaha Walaaltinimada Ay Leedahay Kusoo Bandhigay
Maxaad uga baahantahay inaad ka ogaato taxanaha turkiga gilgilay kaasoo maanta si rasmi ah uga bilowday Astaan Drama?
Cabdiraxmaan Anteeno June 11, 2019
wax ka ogow xiliga uu dhamaanayo taxanaha turkiga gilgilay ee Hercai maxaase ka jira in qeybtiisa 12aad tahay mida ugu dambeysay?
Cabdiraxmaan Anteeno May 25, 2019
Cajiib Katrina Kaif Oo Muddo Labo Sano Kaliya Ay Ku Qaadatay Inay Ku Dhaaftay Salman Khan Taageeraasha Barta Instagramka
20-laadar oo aan dhamaadka filimka laga guuleesanin qaybta labaad (+sawiro)
Zakarie May 7, 2019 May 15, 2019
Karan Johar Muxuu Ka Yiri Wararka Xanta Kuwaaso Sheegayaan Inuu Rajkumar Rao Hogaamiye Kaga Dhigay Qaybta Labaad Filimka Dostana